ငါလိင်လိုအပ်သည်ကိုသူ / သူမမြင်နိုင်သလား (၂၀၁၀) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
Porn စွဲနှင့် Porn-Induced ပြmsနာများအကြောင်း YBOP ဆောင်းပါးများ
သူမသည် / သူငါလိင်လိုအပ်ကြည့်ရှုပါမရနိုင်သလား? (2010)
အပျော်အပါးမှ numbed ဦးနှောက်သတိပြုပါ
သင်သည်သင်၏လိင်ဆက်ဆံမှုကိုမည်မျှကြာကြာခံ။ သင်၏ဆက်ဆံရေး၏တန်ဖိုးကိုတိုင်းတာသနည်း။ သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်၏ပြသနာတိုင်းကို“ အဆင်ပြေရန်” ဖိအားပေးမှုအဖြစ်စတင်တုံ့ပြန်နေပြီလော။
ဒီတော့လျှင်, သင်ကျေနပ်မှု-ပေမယ့်ကတိပေးထားတယ်ယင်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကယ်တင်တတ်၏တဲ့စရိုက်တွေဦးနှောက်ယန္တရား၏သားကောင်များဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာလိင်ထပ်တူပြုခြင်းထဲကစုံတွဲများထားနိုင်ပါတယ်။ (ဤသင့်ရဲ့တဦးတည်းအချိန်အာနိသင်တိုးမြှင့်ရိုက်ချက်အပြီးအထူးသဖြင့်ဖွယ်ရှိသည် ပျားရည်ဆမ်းခရီး neurochemistry ချွတ်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ )
မင်းကလိင်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်ရှေ့ပြေးနိမိတ်အသစ်တစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ကြည့်ရအောင်။ သင်၏အစောပိုင်းအချစ်ဇာတ်လမ်းကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာပြသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးကဲ့သို့သောအလားအလာအချို့ကိုသင်ခေတ္တပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့သလား။ သို့သော်ဆိုးဝါးသည့်အချက်မှာပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များ၏ ဦး နှောက်ကိုစွန့်ခွာသွားစေနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေရန်အစွမ်းတန်ခိုးရှိပုံပေါ်သည် ပိုပြီးမကျေနပ် မကြာမီနောက်မှ။
ဘယ်လိုလဲ? ယာယီအားဖြင့် အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု dampening ဦး နှောက်ရဲ့စရိုက်ကောင်းတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖော်ပြတယ်။ ဘေးဒဏ်သင့်သူများအတွက် * တက်သွားသည့်အရာများသည်ပြိုကျသွားရမည်ဖြစ်ပြီးခဏတာအတွက်အခြေခံသို့ပြန်မသွားတော့ပေ။ ဦး နှောက်ထဲမှာနက်ရှိုင်းတယ်၊ ချိန်ခွင် Tipping နေကြတယ် ဦးနှောက်ကိုပြန်လည်သက်သာအထိပါပဲ။
သင်ယူစရာများစွာရှိသေးသည်၊ သို့သော်အထွတ်အထိပ်ပြီးနောက်လှည့်ပတ်ထွက်ပေါ်လာသည့်ဆုလာဘ်တိုက်နယ်ဖြစ်ရပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာစိတ်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည် (ကျွန်ုပ်တို့အားပျော်ရွှင်မှုခံစားစေနိုင်သည်) နှင့်တူသည်။ ပထမ ဦး စွာ androgen receptors သုတ်ရည်လွှတ်ပြီးနောက်ကျဆင်းနှင့်ပုံမှန်မှခုနစ်ရက်ပတ်လုံးမှတက်ယူပါ။ (ဒါကဆုလာဘ် circuitry အပေါ် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုဖြစ်ကောင်းအတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်အလားအလာထိခိုက်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေကြသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ) အပြင်, opioids သုတ်ရည်ထိကာလအတွင်းဖြန့်ချိ ပုံရှိနေဆဲဟုဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အနေဖြင့်အဘို့အလှည့်ပတ်ဆွဲထား oxytocin အတွက်ကျဆင်းမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်ထိခိုက်ရာ။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်ဦးတစ်စက်ဖွယ်ရှိလည်းရှိပါတယ် တုန့်ပြန် သုခချမ်းသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိတစ်ခု neurochemical အရေးပါသောအမှ: dopamine။ အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာတော့ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ဒါဟာယခုအဖြစ်မတိုင်မီအတူတူပျော်မွေ့တုံ့ပြန်မှုရဖို့ပိုပြီးဆွလိုအပ်တယ်, က equilibrium ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်အထိတခါတရံဆွမရှိငွေပမာဏကိုအမှန်တကယ်ကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်။
မည်သို့ပင်တိကျသောယန္တရားများ, ဦးနှောက်၏အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုအတွက်မဆိုကျဆင်းခြင်းချစ်သူများများအတွက်သတင်းဆိုးပါပဲ။ တဦးတည်းအရာအဘို့မဟုတ်, လူတိုင်းအတွက် neurochemicals တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် wallop ကနေပြန်လည်နာလန်ထူမျိုးဗီဇများနှင့်ကျား, မကွဲပြားမှု, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလေ့အထများမှအတိအကျတူညီ-ကျေးဇူးတင်စကားလမ်းတွေ့ကြုံရသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုကြီးစွာသောစိတ်ကူးတူသောပုံရသည်တစ်ဖန်၎င်းတို့၏သဘာဝအ sensitivity ကိုနှင့်အော်ဂဇင်မှပြန်လာချိန်အထိကိုတချို့ကလိင်အတွက်ရိုးရှင်းစွာစိတ်မဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားသူများအတွက်, သို့သော်, ယာယီ neurochemical (သို့မဟုတ်အဲဒီ receptor) drop-ချွတ်မကြာမီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတချို့မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းပျောက်ဆုံးနေတူသောကျွန်တော်တို့ကိုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နေသောခေါင်းစဉ်: အပျြောအပါးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြ sensitivity ကို။
ရရှိလာတဲ့ angst ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကယ်ဆယ်ရေးရှာကျွန်တော်တို့ကိုလှုံ့ဆျော ယခု (အခါအဆင်မပြေသောအခါ) ။ ဤ“ အသေးစားဆုတ်ခွာမှု” ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ဝေးကွာနိုင်သည်ဟုခံစားရနိုင်ပြီးအခြားအော်ဂဇင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်းမာမှုကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေလျှော့ချင်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ကအိမ်ထောင်ဖက်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးအနှုန်းများကိုပုံမှန်ထက် ပို၍ လိုအပ်နေနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သောနည်းဗျူဟာများသည်ယခုနှေးကွေးသောအကျိုးဆက်တိုက်ဖျက်ရေးတွင်သာယာဝပြောမှုခံစားရန်လှုံ့ဆော်ရန်ကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်နှစ် ဦး စလုံးသည်သင်၏အဆင်မပြေမှုအတွက်တူညီသော“ meds” ကိုရွေးချယ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ တူညီသောအချိန်ဇယားကိုပေါ်, မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘ ၀ ကထပ်တူပြုလို့မရဘူး သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်၏တိုးတက်မှုကိုငြင်းဆန်ပါကသင်၏အိမ်ထောင်ဖက်သည်သင်၏စိတ်သောကကိုသက်သာစေရန်အလို့ငှာဂရုမစိုက်ဟုထင်ရနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ဂရုစိုက်သမျှသည်“ အချို့သောအရာများယူဆောင်လာခြင်း” ကဲ့သို့သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်ပုံရသည်။ ယခုတွင်သင်သည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အဆိုးဆုံးမြင်နေရပြီ၊ အချင်းချင်းအချင်းချင်းဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုကိုသံသယဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကြောင်းမှာသင်၏ ဦး နှောက်သည် equilibrium သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသောအခါသင်၏အသိဥာဏ်မဲ့မှု၊ အခြေခံအားဖြင့်ဆုလာဘ်အစီအစဉ်သည်မစုံလင်မှုနှင့်လိုက်ဖက်သည့်တွန်းအားများကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကသိကအောက်ဖြစ်ရပ်။
ဒီနေ့ခေတ်မှာသင့်ကိုပိုစိတ်ချရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အကြံပေးလိမ့်မယ်၊ သူကမခံစားရသေးတဲ့သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံစဉ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ kinkier အဖြစ်အပျက်များကိုကြည့်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအတူတကွကြည့်ရှုခြင်း၊ ညနေခင်းများအတွက်မိတ်ဖက်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမှတ်ချက်ချသည်။
ကျွန်မသူမပဲကျနော်တို့ကိုပိုပြီးမကြာခဏလိင်ရှိသည်မယ်လို့နှင့်ငါ့လိုအပ်ချက်ပိုကောင်းကျေနပ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်, ပို orgasm ရှိသည်, ဆိုလိုသည်မှာပိုပြီးလိင်ပျော်မွေ့နိုင်လျှင်သောယူဆချက်အပေါ်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါသူမ၏ကောင်းတစ်ဦးဆာန်ပေးဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်။ အဲဒီအစားသူမကျနော်တို့ရဲ့အိပ်ခန်းထဲကပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
တိုတောင်းခုနှစ်, ယုတ္တိဗေဒဖြစ်ပေါ်စေမည် နည်းသော ခြုံငုံကျေနပ်မှု။ သင်၏လက်ရှိဆက်ဆံရေးနှင့်ရေရှည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုအတွက်သင်၏အခွင့်အလမ်းများကိုပင်လျော့ကျစေနိုင်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
“ Heat 'em up” နည်းဗျူဟာများသည်ကာလတိုရလဒ်များနှင့်လျှို့ဝှက်ကုန်ကျစရိတ်များကိုရိတ်သိမ်းသည်။
ပိုများသောပြင်းထန်သောဆွအမြန် orgasm ထုတ်လုပ်ပေမယ့်ထုံဦးနှောက်ကိုရှေ့ဆက်နိုငျသညျ, ဒါကြောင့်ဒီနည်းဗျူဟာကိုအောက်ပါရက်ပေါင်းကျော်ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ သတိရပါ over-နှိုးဆွပေးဦးနှောက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဂဏန်း ဦးနှောက်။ ထိုအခါနောက်ထပ်ထုံဦးနှောက်ရှည်လျားများအတွက်ကျေနပ်ဖို့ပင်ခက်ခဲသည်။ တကယ်တော့, အစဉ်မပြတ် Over-ဆွ နိုင် သင့် ဦး နှောက်ကိုအာရုံကြောဓာတုနက်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်သို့လှည့်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည့်မိတ်ဖက်သည်စိတ်သက်သာမှုသို့မဟုတ်စိတ်သက်သာမှုအတွက်သာ ပို၍ သက်သာမှုကို ပို၍ လိုအပ်သည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်နာကျင်စွာမမျှတပုံပေါက်နိုင်ပေမဲ့တစ်ဦးအလယ်မြေပြင်ကိုညှိနှိုင်းမကူညီနိုငျသညျ။ သင်လိုအပ်နိုင် အချိန် ပုံမှန် sensitivity ကိုရန်သင့်ဦးနှောက်ကို (s) ကို restore ရန်။ သဘာဝက၎င်း၏သင်တန်းကိုယူခွင့်ပြုရန်။ ဤအတောအတွင်းကြောင့်နှစ်သိမ့်လှုပ်ရှားမှုများကိုရှေးခယျြ နောက်ထပ် Over-ဆွခြင်းမရှိဘဲ: လေ့ကျင့်ခန်း, ဖော်ရွေအပြန်အလှန်, ဘာဝနာ, သဘောသဘာဝအတွက်အချိန်, အခြားသူများအားဝန်ဆောင်မှု, ဒါကြောင့်ထွက်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၌သင်တို့၏အိမ်ထောင်ဖက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ ရက်ရက်ရောရော Non-foreplay ချစ်ခင်; ပြန်ညှိ၌သင်တို့ကိုငါဆောင်ခဲ့ကူညီပေးပါမည်။
Desensitization ဖောက်ပြန်ပိုပြီး tantalizing စေသည်။
အသစ်အဆန်း enlivening တစ်ဦးအလုအယက်ကမ်းလှမ်း dopamine-နှင့်ဝတ္ထုအလားအလာလိင်မိတ်ဖက်အသစ်အဆန်းများအများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာပုံစံများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, အွန်လိုင်း chatroom, ဒါမှမဟုတ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်အတွက်လူတစ်ယောက်လုံးကိုကြည့်ရှု ပိုကောင်း သင့် ဦး နှောက်ကနံပါတ်ဖြစ်တဲ့အခါ။ သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေတာအားလုံးဟာ dopamine fix ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသင်လုံးဝမသိပါဘူး။ (ငါတို့ ဗီဇ အနာဂတ်မှာသို့အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်စေရန်ဒီယန္တရားကိုအသုံးပြုပါ။ )
တစ် ဦး desensitized ဦး နှောက်အဘို့အသစ်အဆန်း၏ဆွဲဆောင်အထူးသဖြင့်ပြproblemနာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လှောင်ပြောင်သရော်စရာများ၊ မကြာခဏဒြပ်ဆွဲအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောအရာများစွာဖြင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုကို“ ဆေးဝါး” ပေးသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်သည်ဟန်ချက်မျှပြန်မသွားနိုင်ပါ။ ရလဒ်တစ်ခုမှာမြက်သည်မကြာခဏဖြစ်သည် စိမ်းလန်းတဲ့ကြည့် အပြင်မှာ ဆက်ဆံရေး။
နေ့စဉ်ချစ်ခင်မှုသည်သာမန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောငွေချေးစာချုပ်သမားများအတွက်အလွန်စိတ်ချမ်းမြေ့ဖွယ်ရာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့မထမဆုံးနိုင်လျှင်ပင်အကျိုးရှိသည်။ (ပင်ပေါ့ပေါ့ bonobo chimps တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အထွတ်အထိပ်မပေးပါဘူး သူတို့ကပေါ်ရ။ )
ဦး နှောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းအာရုံခံစားမှုကြောင့်ခဏတာဖြည့်တင်းလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှသာဟူသောအတွေးသည်မဆွဲဆောင်နိုင်ပါ။ မနှစ်သက်သည့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ နူးညံ့သိမ်မွေ့မည့်အစားကျွန်ုပ်တို့ဂူလိုလိုအချိန်လိုလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုပြင်းထန်သည့်သို့မဟုတ်ပိုမိုရဲရင့်သောလိင်ဆက်ဆံမှုကိုလိုချင်ကောင်းခံရလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးတင်းမာမှုကိုလျော့နည်းစေသော်လည်း၎င်းသည် desensitization ပြproblemနာကိုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှအချို့သည်သဘာဝအားဖြင့်လိင် - အထောက်အကူများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့ကူးပြောင်းခြင်းအားဖြင့် - အားထပ်တူပြုခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည့် libidos များကိုတန်းတူညီမျှဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ယနေ့တုန်ခါသူများနှင့်အလွန်အမင်းညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများသည်အလွန်ပြင်းထန်စွာဖြင့်သူတို့အလုပ်များကိုလုပ်နိုင်ကြသည် နောက်ထပ် ဦး နှောက်၏ပျော်ရွှင်ဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကိုအလွန်အမင်းလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့်ထုံခြင်း။ အချိန်တန်လျှင်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမစဉ်းစားတော့ပါ အဆိုပါတတ်ပြီးတက်ပါဝါ ပေါင်းစည်းဖို့။
လိင်များအတွက်ပြင်းထန်သောမတရားသောစိတ်ဖိစီးမှုသော်လည်း, မတ်ေတာရှိသောအိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်းတစ်ဦး insatiable ရည်းစားနှစ်သိမ့်ဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကျော်ခံရနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကစုံတွဲ, တောင်းပန်ငြင်းခုံမှုမရှိသလောက်နှင့်ခေါင်းကိုက်ဖွံ့ဖြိုး။ တချို့ကနေ့စွဲညနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျက်နှာသာညှိနှိုင်းရန်။ တချို့ကခရီးသွားအမြောက်အမြားလိုအပ်ကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အယူ, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့အချိန်ရှိသည်။ တယောက်သောသူက,
တစ်ခါတုန်းက ၂ ပတ်၊ ၂ ပတ်လောက်အဝေးကနေဝေးလံခေါင်သီတဲ့ fly-in fly-out အလုပ်မှာလုပ်ခဲ့တယ်။ ရလဒ်အနေနှင့်ကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးတွင်အကောင်းဆုံးလိင်ဘဝကိုခံစားခဲ့ရသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်တာကပျော်စရာအချိန်လေးတစ်ခုပဲ။ အထူးသဖြင့်ကလေးတွေအိမ်ပြန်မရောက်ခင်အိမ်ကိုရောက်တဲ့လေယာဉ်ကိုငါဖမ်းမိတိုင်း။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းထွက်ခွာသွား၏ယခုအချိန်တွင်ကိုမြည်းစမ်း။ သူမပြောခဲ့သည်မှာ“ မင်းအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါငါကြိုက်တယ်၊ သင်ထွက်သွားတဲ့အခါငါကြိုက်တယ်”
သိသာထင်ရှားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ကျိန်စာဟာ (ယာယီ) ဦး ဆောင်မှုလျော့နည်းသွားပြီးတုန့်ပြန်မှုလျော့နည်းသွားစေပြီးမကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကရောမကဗျာဆရာ Ovid ကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဤသို့အဆိုးရွားဆုံးကုသမှုကိုအကြံပေးခဲ့သည် -“ မင်းရဲ့မိန်းကလေးကိုနေ့ရောညပါစွန့်ခွာပြီးပျော်ရွှင်ပါစေ။ ထို့ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပညာရှိများသည်လိင်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများနှင့်ဟန်ချက်ညီစေရန်လိင်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နည်းစနစ်များကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည် သူတို့ရဲ့သမဂ္ဂများ၏သဟဇာတရေရှည်တည်တံ့။ kosher လိင်ဥပမာ, လုနီးပါးနှစ်ပတ်အတွင်းသီးခြားကုတင်အတွက်တစ်လပြဌာန်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
သတိရပါ၊ သင့်ကြင်ဖော်၏လျစ်လျူရှုမှု (သို့မဟုတ်စိတ်သဘောထားတစ်ခု) သည်အလွန်ကောင်းသောအရာများကြောင့်ဖြစ်သည့်အိပ်ချင်နေသောအာရုံကြောဆဲလ် receptors များသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ရှိလျှင်သင်၏ပြင်ပစည်းညှိမှု libidos သည်မည်သူမဆိုအမှားမဟုတ်ပါ။ စိန်ခေါ်ချက်ကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားပါ။ သင့် ဦး နှောက်ကို၎င်း၏အကောင်းဆုံးစံနမူနာအဖြစ်သို့ပြန်သွားစေပါ။ ပိုမိုမျှတမှုရှိခြင်းကသိမ်မွေ့သောအပျော်အပါးများကိုအရသာဖြစ်စေသလား၊ ထပ်မံ၍ သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုကြည့်ပါ ကောင်းသော တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရန်။
* လတ်တလောစမ်းသပ်မှုများတွင် သုတေသီများမှတ်ချက်ပြု ကြောင်းရံဖန်ရံခါတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီဒါဇင်နှစ်ခုတိရိစ္ဆာန်များသို့မဟုတ်ဒါစမ်းသပ်ပြီး မ ဒီအထူးသဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ကုန်ခမ်း D2 receptors) ပြသပါ။
တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကို? ကမ္ဘာ့အများဆုံးအသုံးများဆေးပညာဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေလက်စွဲ, ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး (ICD-11), သစ်တစ်ခုရောဂါပါရှိသည် porn စွဲများအတွက်သင့်လျော်သော: "compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ Disorder။ "(2018)
porn / လိင်စွဲ? ဤစာမျက်နှာကိုစာရင်း 39 မှ neuroscience-based လေ့လာမှုများ (MRI, fMRI, EEG, neuropsychological, ဟော်မုန်း) ။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများအစီရင်ခံသည့်အာရုံကြောတွေ့ရှိချက် mirror အဖြစ်သူတို့စွဲမော်ဒယ်ခိုင်မာသောထောက်ခံမှုပေး။
porn / လိင်စွဲလမ်းပေါ်တွင်စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများက '' ထင်မြင်ချက်များ? ဤစာရင်းတွင်ပါဝင်ပါသည် 16 မကြာသေးမီကစာပေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း & ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ကမ်ဘာပျေါတှငျထိပ်အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်အချို့ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ လူအားလုံးတို့သည်စွဲမော်ဒယ်ထောက်ခံပါတယ်။
ပိုပြီးအစွန်းရောက်ပစ္စည်းမှစွဲလမ်းနှင့်တင်းမာမှုလက္ခဏာတွေ? လေ့လာမှု ၃၀ ကျော်သည်တွေ့ရှိချက်များကိုညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံမှု)၊ ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည် (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
: "မြင့်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ" porn သို့မဟုတ်လိင်စွဲလမ်းပျောက်ကရှင်းပြသည်သောကလက်ခံစကားပြောအမှတ် Debunking အနည်းဆုံးလေ့လာမှု ၂၅ ခုတွင်လိင်နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများသည်“ မြင့်မားသောလိင်ဆန္ဒရှိ” သည်ဟုဆိုကြသည်။
porn နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ? ဤစာရင်းတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ porn အသုံးပြုမှု / ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစွဲခြင်းနှင့်နိမ့် arousal ချိတ်ဆက် 26 လေ့လာမှုများပါရှိသည်။ အဆိုပါ, fအဆိုပါစာရင်းထဲတွင် irst5လေ့လာမှုများကိုသရုပ်ပြ causation, သင်တန်းသားများအဖြစ် porn အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်အနာကိုငြိမ်းစေ။
ဆက်ဆံရေးအပေါ် porn ရဲ့သက်ရောက်မှု? နီးပါး 60 လေ့လာမှုများလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ (အမျှဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ )
တစ်ဦးရှိနေဆဲဟု Post-အော်ဂဇင်သံသရာ၏ကြီးထွားလာသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထား (လေ့လာမှုများ)
“လိင်ကိစ္စက ဖက်ရှင်မကျဘူး။ အတုအယောင်များနှင့် အတုအယောင်များ အစားထိုးခြင်းဖြင့် တွန်းထုတ်ခံရသော်လည်း၊ အနီးနားတွင် မရှိသော်လည်း၊ t.co/Vp9xUPNfkM
အဖေများနေ့ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်ုပ်တို့သည် ညစ်ညမ်းမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ရည်စူးထားသည့် ဖခင်အသစ်ကို မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။ @ဂါဘီဒမ် ၏ ... t.co/xKAtWaYVfH